ကျွန်တော့်ဘဝက ပျော်စရာမိသားစု သူငယ်ချင်းကောင်းတွေနဲ့ ပြည့်စုံပါတယ်….ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော့်မှာ ထိပ်တန်းလျို့ဝှက်ချက်တစ်ခုရှိတယ်…တစ်နေ့ ကျွန်တော် လီယာနဲ့ စကားပြောဖြစ်တယ်… သူက ခရိဝုကျောင်းက ကျောင်းသားတွေအကြောင်း တင်တဲ့ ခရိဝုလျို့ဝှက်ချက် ဘလော့အကြောင်း ပြောတာပါ…အဲ့ ဘလော့မှာ ဘလူးဆိုတဲ့သူက သူ့လျိုဝှက်ချက်ကို ဝေမျှခဲ့တာပါ… သူ့ပို့စ်ကို ကျွန်တော်ဖတ်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ သူ့လျို့ဝှက်ချက်နဲ့ ကျွန်တော့်လျို့ဝှက်ချက်တူနေခဲ့ပါတယ်…အဲ့တော့ ကျွန်တော် သူနဲ့ သိခွင့်ရဖို့ ချဉ်းကပ်ခဲ့ပါတယ်… ဂျက်ဆိုတဲ့ နာမည်နဲ့ပေါ့…. လျို့ဝှက်ချက်ချင်း တူနေတော့ ကျွန်တော်တို့ နှစ်ယောက်ရင်းနှီးခဲ့ပါတယ်..ကျွန်တော်လဲ သူ့ကို သံယောဇဉ်ရှိလာခဲ့ပါတယ်…ဒါပေမဲ့ ကံဆိုးခဲ့ပါတယ်… ဒါကတော့ ကျွန်တော့်ကျောင်းက သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ မာတင်က ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက် အပြန်အလှန်ပို့ထားတဲ့ စာတွေကို တွေ့သွားခဲ့တာပါ….မာတင် ကျွန်တော့်လျို့ဝှက်ချက်ကို သိသွားတဲ့အချိန်မှာတော့….ကျွန်တော်တစ်ခုမေးချင်ပါတယ်…ကျွန်တော့်လျိုဝှက်ချက်ကို စာဖတ်သူသိရင် ရော ကျွန်တော့်ကို ဘယ်လိုယူဆမလဲ….ကျွန်တော့်အပေါ်ခံစားချက်ပြောင်းလဲသွားမလား… ပုံမှန်အတိုင်းပဲ နေမလား…..ကဲ ဆိုင်မွန်ရဲ့ လျို့ဝှက်ချက်က ဘာလဲဆိုတာသိဖို့ “Love Simon” ကိုကြည့်ရှုအားပေးကြပါဦး…. (ဇာတ်လမ်းအညွှန်း နဲ့ ဘာသာပြန်သူကတော့ May Haruko ပါ) File Size : (900 MB) and (390 MB)
Quality : Blu-Ray 720p and 360p